Njem si Paris gaa Amsterdam Site na Train In 3 awa | Save A Train
Home > Travel Europe > Njem si Paris gaa Amsterdam Site na Train In 3 awa
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 14/05/2020)
Ọ bụ eziokwu na e nwere ihe karịrị otu ụzọ iru Amsterdam si Paris. Ma mgbe ha na ihe niile abịa na ha pro na ọghọm, njem site na Paris na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè na-anọgide na ndị kasị mma nhọrọ mgbe ị na-eme na-atụnyere. Anyị na-enye gị ihe niile mere ụgbọ okporo ígwè njem kwesịrị gị akpa oke, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-abata na Amsterdam si Paris n'enweghị ihe na-na ụdị na nkasi obi.
Paris na Amsterdam site Train vs. Ọzọ ụdịdị nke Travel
Carnyịnya site na Paris site na Amsterdam bụ ihe ịrụ ụka adịghị a ọmarịcha mbanye. Otú ọ dị, nanị ihe ọ na-eme ka uche ma ọ bụrụ na i nwere ike imeli oge na-obi ike iji na-ịnyagharịa ụzọ n'etiti obodo abụọ.
N'agbanyeghị nke ụzọ na ị na-na gị ụgbọ ala njem si Paris na Amsterdam, e nwere motorways, Ụtụ okporo ụzọ, na mmanụ ụgbọala oriri na-eche echiche banyere. The mbanye nwere ike na- 6 awa, na kacha mma; ya mere na ị ga-mkpa na-eme atụmatụ maka gị ọzọ akwụsị. Ọzọkwa, tụlee ihe ọ bụla-arụ ọrụ na mmanụ ụgbọala chọrọ n'ụzọ, nakwa dị ka a nri ehihie. All ndị expenses nwere ike na ga tinye.
Ị pụrụ ịtụle ewere ụgbọ ala n'ihi na ị na na na nụrụ na ọ bụ ọnụ ala ụzọ gaa Amsterdam si Paris. Ezie na nke a bụ eziokwu, njem ga-fọrọ nke nta 7 awa. Nke ahụ bụ ogologo oge na-n'okporo ụzọ. Ọ ga-eche na ọbụna ogologo n'ihi na ị na-na na mfafaha na a ụgbọ ala na ohere na-akpali gburugburu.
E nwekwara nhọrọ efe site Paris na Amsterdam. Ma mgbe ụgbọ elu ga naanị otu awa na 15 nkeji, ọ naghị enye ala otu ụzọ ahụ dị ka iji njem njem ala. Ọ bụrụ na ị na-na na na klaasị mbụ, ị ga-ahụ onwe gị kwabara na iru ala ụgbọelu oche.
E nwekwara mba mara mma European mma na-enwe mgbe ị na-eme njem site na ụgbọelu. Ị ga-akasị nwere n'ígwé ojii n'èzí anya na ọ bụrụ na ị na-eme ka nọ a window oche; ma, ị pụrụ ịdabere na ihe na-elu nkiri na-ị ọbịa. Echefula na mgbe njem nke ugbo elu bụ theoretically ndị kasị ụzọ na-esi Amsterdam si Paris, ị ka dị mkpa ka iburu n'uche na oge na ego ọ ga-ewe iji nweta n'ọdụ ụgbọ.
Nkasi obi na nkasi obi nke Paris ruo Amsterdam site na Train
A bịa n'ihe banyere isi na Paris gaa Amsterdam, njem ụgbọ oloko na ụgbọ oloko Thalys na-enye ụwa kachasị mma. Ọ bụ achọghị ịzụ kasị ala na-adaba adaba ụzọ njem ekele ịzụ elu-ọsọ. Nwere ike ịga ije n'ụzọ ụgbọ ala n'enweghị nsogbu ọbụlagaghị ama na ọ na-aga.
Also ga-enwekwa ahụ ike iji ụgbọ oloko mee njem nke nchekwa, maara na ị na-agaghị na-ekere òkè okporo ụzọ na okporo ụzọ na akwọ ụgbọala ara ara. Na na gbapụrụ ọsọ nke 300 km kwa hour, ị na-eru gị ebe na ọkara oge ọ ga-ewe site ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala. Akwa-agba ụgbọ oloko nwere ike inwe ị na-Amsterdam si Paris na 3 awa na 19 nkeji. N’adịghịkwa ka njem ụgbọ elu, ị ga-enwe ikpọ European obodo na-enwe.
Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè tupu, na i nwere ike na-enwe ndị dị ọnụ ala udu, Ndinam njem site zụọ ndị ọzọ echekwa nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ.
Site n'iji ya mee njem Thalys ụgbọ oloko, i nwere ike ịzụta tiketi ruo 90 ụbọchị tupu njem gị ụbọchị na-azọpụta ruo 75% on gbaa ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụrụ na ị na doputa gị oche n'oge.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys Atụmatụ trainjourney Tranride ụgbọ oloko traintip ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè njem Travel travelamsterdam traveltips